Wiil Dhalinayaro Ah Oo Maydkiisa Oo La Gawracay Laga Helay Seylada Magaalada Burco | Araweelo News Network (Archive) -
Wiil Dhalinayaro Ah Oo Maydkiisa Oo La Gawracay Laga Helay Seylada Magaalada Burco
Burco(ANN) Wiil dhalinyaro ah ayaa saaka madkiisa laga helay meel u dhaw saylada Xoolaha ee Magaalada Burco, kaas oo sida wararka aanu ka helay qaar ka mid ah eheladiisu sheegeen in qoorta laga jaray. Marxuumka la dilay
ee lagu fuliyay dilka foosha xun ayaa lagu magacaabi jiray Mustafe Cilmi Jaa’id, oo dadiisa lagu qiyaasay 19-20 jir, isla markaana dilkaa ayaan la aqoonsan cidii ka danbaysay ilaa hada. Sida ay sheegayaan wararka la xidhiidha dilka marxuumkaa ayaa ka mid ahaa aradayda wax ka barata Dugsiga Sare ee Candlelight Burco.
Maydka Saaka laga helay seylada xoolaha ee Burco ee ardayga ayaa sida ay sheegeen dadka arkay maydka marxuumka inuu u muuqday mid la gawracay, taas oo aragaxgax badan galisay dadweynaha Magaalada Burco.
Cisbitaalka Guud ee Magaalada Burco oo la keenay maydka ardayga saaka ayaa si weyn dadku ugu soo urureen, kuwaas oo ka argagaxay falka layaabka leh ee habeenkii xalay ahaa ka dhacay Magaalo madaxda Gobolka Togdheer ee Burco.
Saraakiisha ciidamada Booliska ayaa sheegay inay socdaan baadhitaano ku saabsan cidii ka danbaysay dilka marxuumkaa. Sidaa awgeed aanay ka hordhacayn ilaa inta ay soo saarayaan natiijada cidii falkaa ka danbaysay.
Maahaa markii ugu horaysay ee Maagalada Burco lagu dilo qof rayid ah, taas oo la garanwaayay cid dishay, balse waxaa dhawaanahanba isa soo taraayay Dilal Qorshaysan oo loo gaystay dad rayidka ah, kuwaas oo ciidamada Boolisku ay shegeen inay wadaan baadhitaanada falalkaa, balse falkan ayaa u muuqda mid ka duwan qaabkii dilalka iyo shirqoolada hore uga dhici jiray ka duwan.